Abasoze bamkhohlwa uMgqumeni | News24
Cape Town - "Wangenza wangihlukanisa naye ngiyamkhumbula...ubek'angithinte lana angenze ngijabule usthandwa sami"
Kuphela iminyaka emine lwalala uqubhu lwamanzi angcolile lakubhukuda khona zonke ingulube, uKhulekani Kwakhe Khumalo, owayaziwa kakhulu ngelikaMgqumeni.
Igama likaMgqumeni alisoze lalibaleka ngenxa yokuba yigagu kwakhe kanjalo nangendaba enkulu kaSbusiso Gcabashe owaqamba amanga wazibiza ngaye, ethi uvuke ekufeni.
Sibuze abafundi bethu kanje:
Ngabe inhliziyo usuwayixolisa ngokudlula kwakhe emhlabeni?
Yini omkhumbula kakhulu ngayo?
USphesihle Mnguni uthe: Kusanzima ukwamukela ukuthi yisekho "iNkosi yoMaskandi".
USifiso M Siwela uthe: "Ngizothumela iSMS".
UNokuthula Zulu uthe: "Zishaya ushindindi uma zingibona ziyangishalazela bangiloyile na? Ngisize thongalami."
USthembiso Nene uthe: "Nhliziyo yami ubuye ungidide usuke uyithathe ngegugu nento encane engasilutho"
UThubah Mvelasir uthe: "Hhayi bo musukungizonda ngoba angilazi icala lami."
USbo Fowh Heaven uthe: "Bengithi umntanakho ngizomulobola mama, uhlulekile ukuzikhethela indoda yakhe"!
Kusenzima ukwamukela ukuhamba kweBhova ngoba abaculi abakhona abayikhiphi leyanto eyayikhishwa yilo, neyangenza ngathanda umaskandi.
Bheka Izindaba News24, ubone ukuthi abanye batheni.